‘क्यान्सर मृत्युको पर्यावाची होइन’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
२९ आश्विन २०७४ १५ मिनेट पाठ
चितवन- क्यान्सर रोगको नाम सुनेपछि धेरै झसंग हुन्छन् । कोही व्यक्तिलाई क्यान्सर लागेको छ भनेर चिकित्सकले भनेमा उसले सोच्छ अब मेरो मृत्युको दिन नजिक आयो । परिवार र समाजका अन्य व्यक्तिले पनि यही ठान्छन् । गत असारदेखि क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी भरतपुर–१२ की ४३ वर्षीया सीता श्रेष्ठको मनमा पनि यस्तै कुरा खेलिरहन्थ्यो ।
क्यान्सर रोगको उपचार हुने नेपालको प्रमुख अस्पताल भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. निर्मल लामिछानेले उपचारका साथै समाजको सद्भावले बिरामी निको हुने बताए । ‘यो रोग निको हुन्छ भनेर हामीले पनि भन्छौं तर जो निको भएर आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ हो तपाईं जस्ताले एक चोटी भन्नु हामीले सय चोटी भने बराबर हुन्छ,’ डा.लामिछानेले भने ।
आमा, दिदी, बिहिनी, छोरी वा नजिकको नातेदारमा स्तन क्यान्सर देखिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई स्तनक्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ३० वर्षपछि बच्चा जन्माउने महिला, बच्चा नजन्माएका महिला, स्तनपान नगराउने महिला, स्तनमा पहिलादेखि नै गाँठागुँठी वा पुराना समस्या भएका तथा एउटा स्तनमा क्यान्सर भएका महिलालाई पनि अर्को स्तनमा क्यान्सर हुने खतरा प्रवल रहने डा. विश्वराम पौडेलले बताए ।
यस्तो अवस्था रहेका महिला विषेश सर्तक रहनु पर्ने हुन्छ । स्तनमा गिर्खा फेला पर्नु, आकार परिवर्तन हुनु, रगत वा पीप मिसिएको दूध निस्कनु, स्तनको छालाको रंग सुन्तालाको सुकेको बोक्रा झै हुनु, स्तनको मुन्टो गाडिनु, स्तनमा आएको घाउ लामो समयसम्म निको नहुनु भनेको स्तन क्यान्सरका लक्षण भएको डा.पौडेलले बताए ।
‘सुरुकै अवस्थामा उपचारका लागि आए स्तन क्यान्सर मात्रै होइन सबै क्यान्सर पूर्ण निको हुने गर्छ । तर हामीकोमा दोस्रो वा तेस्रो अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उपचार गराउन आउने धेरै छन्,’ डा.पौडेलले भने । आफ्नो स्तनको आफंैले परीक्षण गरेर पनि क्यान्सरको सम्भावनालाई बेलैमा पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
डा. पौडेलका अनुसार महिनावारी भएको सात दिनपछि महिलाले स्तन हेरेर र छामेर स्थनमा भएको गिर्खा र परिवर्तनका बारेमा थाहा पाइराखे रोग पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । गिर्खा भेटेमा वा स्तनको रंग र अवस्था अस्वभाविक रूपमा परिवर्तन भएमा स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्ने हुन्छ ।
क्यान्सर उपचारमा संलग्न डा. विश्वराम पौडेलका अनुसार यो रोगले ४० वर्षभन्दा माथि ५०÷५५ उमेरसम्मका व्यक्तिलाई बढी सताएको छ । सो अस्पतालमा सन् २०१५ मा उपचार गराउन आएका बिरामीको तथ्यांक हेर्दा १९ वर्षभन्दा कम र ९० वर्षभन्दा बढीका उपचारका लागि आउनेमा एकजना पनि छैनन् ।
स्तन क्यान्सर महिलालाई मात्रै नभइ पुरुषलाई पनि हुन्छ । महिलालाई जस्तै देखिने लक्षण पुरुषलाई पनि देखा पर्छन् । पुरुषको काखीमा गिर्खा देखिएमा पनि स्तन क्यानसरको सम्भावना रहन्छ । त्यसैले महिला मात्रै नभई पुरुष पनि यो विषयमा सजग हुनु पर्ने डा. विश्वराम पौडेलले बताए । ‘पुरुष पनि ज्यादै नै दुख्यो भन्दै छटपटिँदै आउँछन् । उनीहरूलाई स्तन क्यान्सर भइसकेको हुन्छ,’ पौडेलले भने ।
बीपी कोइरला मेमोरियल क्यानसर अस्पतालमा सन् २०१५ मा स्तन क्यान्सर भएकामध्ये दुई सय ९९ जनाको शल्यक्रिया भएको थियो । यीमध्ये चारजना पुरुष रहेको डा. पौडेलले जानकारी दिए । सो अस्पतालको स्तन क्यान्सर युनिटको बहिरंग विभागमा परीक्षणका लागि आठ हजार दुई सय ८२ जना आएका थिए । तीमध्ये एक ९८ जना पुरुष थिए ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०८:२७ आइतबार
क्यान्सर मृत्युको पर्यावाची होइन